Usuku lweSenzo seBlog: Amanzi neoyile | Martech Zone
NgoMvulo, Oktobha 15, 2007 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Andiyiyo indalo. Kwaye andisixhasi "Inyaniso engathandekiyo". Inkqubo ye- idatha ikrokrela kwaye ndicinga ukuba kukuzikhukhumalisa komntu okholelwa ukuba izenzo zethu ezimbi ngandlela thile zibulala uMhlaba. Umhlaba awusekho enkathazweni… ngabantu abanjalo.
Ndingathanda ukuqhuba imoto yombane, kodwa ndiyazi ukuba azisebenzi kakuhle kwaye, ekugqibeleni, zitshisa ipetroli. Ndingathanda ukuqhuba imoto esebenzisa ezinye izibaso, kodwa ndiyazi ukuba ukwenza loo mafutha akusebenzi kwaye… ekugqibeleni kuyabasa. Mhlawumbi i-hybrid yeyona mpendulo ilungileyo, kodwa ndixhalabile apho iibhetri ziya khona kunye nolwelo olusebenzayo olusebenzayo.
Ndiyaqonda ukuba ikratshi lethu likwabangela ungquzulwano lwehlabathi, imiba yokhathalelo lwempilo, kunye nengxaki yamandla xa kunokuthintelwa. Ndingathanda ukuhamba phandle ndinuke umoya omtsha. Ndifuna ukukwazi ukutyelela iintaba kwaye ndingaboni inkunkuma. Ndingathanda ukusibona sichitha imali encinci ekucoceni. Kwaye, ewe, ndingathanda ukuba i-United States isike ukuxhomekeka kwayo kwioyile nakwizizwe zama-Arabhu.
Ukwenza oko, kuxhomekeke kum ukwenza umahluko. Abantu bathi yonke ipolitiki iqala ekhaya. Ndingacelomngeni lokuba lonke ulondolozo lwamandla luqala ekhaya. Imali echithwe kwiibhotile zeplastiki, ukugcwaliswa komhlaba kunye namandla kuyachithwa kwaye loo nto yenza umntu olondolozayo njengam afune ukuxhasa 'uhlaza'.
Njengomntu othanda ngaphandle, andifuni ukubona ukungcola kunye nokulahla inkunkuma kususa kubuhle bendalo belizwe lethu. Andifuni nokusibona kufuneka silwe iimfazwe ukuze sigcine ukutya kwethu ngeoyile.
Kodwa ndingawenza njani umahluko? Nazi izinto ezi-3 endinokuzenza (kwaye nawe unako!):
Yeka ukuthenga amanzi asebhotileni. Ndithenga iimeko ekhaya kwaye ndibona inkunkuma yam inokugcwalisa ngokukhawuleza nangokukhawuleza. Ndiza kuya kwinkonzo yasekhaya apho amanzi aziswa ngejogu ezinokuphinda zisebenze. Ndiyoyika ukuba andinakushukuma ndiyokukha amanzi, amanzi kumasipala wam ayanuka kwaye ashiya umhlwa kuyo yonke into.
Ndizokuthenga kwintengiso yomfama walapha. Ngaba uyazi ukuba umyinge wemifuno okanye iziqhamo zihamba iikhilomitha ezili-1,800 ukuya kwipleyiti yakho? (Umthombo: Uqoqosho olunzulu). Ukuhanjiswa kweefama ukuya kwizitena okanye ukupakisha izityalo, emva koko kwiivenkile ezinkulu, ngumthengi omkhulu wepetroli kwilizwe lethu. Kwaye kuyamkhathaza umfama kuba iindleko zokuhamba zinqunyulwe kwixabiso. Xhasa intengiso yefama yakho kwaye bafumane imali eninzi kwaye sisebenzisa amafutha ambalwa!
Lungisa i-thermometer yakho kwaye uvumele iidigri ezi-5 ngaphezulu nakweliphi icala - kokubini kushushu kwaye kuyabanda. Kutheni usebenzisa umoya opholileyo okanye ubushushu? Guqula iimpahla zakho ngaphakathi zikunike intuthuzelo… musa ukusebenzisa amandla angaphezulu.
Ndiza kuqala namhlanje. Ndiyathemba ukuba nawe uyakwenza oko!
tags: Indawo yokuthengisa yeComcashimpendulo ye-imeyileUkulungiswaisikhoji sokuthengaUkulahlwa kwinqwelo othengela kuyoimigca yesifundowp_posts
Uyitya njani i-Gourmet Pretzel?
Oktobha 15, 2007 ngo-2: 39 PM
Iposi enkulu, uDoug. Ndihlala ndikholelwa ekwenzeni into onokuyenza kwaye ungazami. Ndihlala ndithenga okutsha xa ndinako b / c ukuba sempilweni, ukuxhasa umfama / uqoqosho lwasekhaya kwaye ndingaze ndicinge nokunciphisa ukuthuthwa. Nditshintshele kwi-pitita yaseBrita endaweni yeebhotile zamanzi, zitshiphu kunenkonzo yasekhaya kwaye awunakukhathazeka malunga nokuhanjiswa. Guqula nje isihluzo sakho rhoqo kwiinyanga ezimbalwa kwaye ukhumbule ukugcwalisa ingqayi yamanzi ngaphambi kokuba iphume. Kuthatha imizuzu ukucoca.
Ndikwasebenzisa iibhalbhu ezonga umbane. Ngelixa nditshintshele kwezi bulbs, iingxelo kunye nabantu endibaziyo abazisebenzisayo bathi bayakunciphisa iidola ezimbalwa kwityala lakho lombane lonyaka kwaye bangcono kwindalo b / c hayi inkunkuma eninzi eveliswa kukutshintsha Iibhalbhu kwaye zisebenzisa amandla amancinci.